किन केही महिलाले महिनावारीको रगत अनुहारमा दल्छन् ? « रिपोर्टर्स नेपाल
किन केही महिलाले महिनावारीको रगत अनुहारमा दल्छन् ?
प्रकाशित मिति : 2019 July 27, 10:37 pm
काठमाडौं, साउन ११ । लौरा टेक्सिरा प्रत्येक महिना पृथ्वीसँग जोडिने एउटा संस्कार गर्छिन्। २७ वर्षीया उनी आफ्नो महिनावारी हुँदाको रगत जम्मा गर्छिन् र आफ्नो अनुहारमा लगाउँछिन्। बाँकीलाई पानीमा मिसाउँछिन् र त्यो पानी बिरुवामा हाल्छिन्।
सिडिङ द मुनू भनिने यो प्रथा पूर्खादेखि चल्दै आएको परम्पराबाट प्रभावित छ। यो प्रथा अनुसार महिनावारी हुँदाको रगतलाई प्रजनन शक्तिको प्रतीक मानिन्छ।
महिलाहरू जो यो अभ्यास गर्छन् उनीहरूको मुन्सू मनाउने आफ्नै तरिका छ। उनीहरू महिनावारीको चरण र चक्रको आआफ्नै तरिकाले अर्थ लगाउँछन्।
लौराले बिरुवामा पानी हाल्नका लागि आफ्नो मन्त्र भएको बीबीसीलाई बताइन्स् म क्षमा चाहन्छु, मलाई माफ गर्नुस्, म माया गर्छु र म तपाईँप्रति कृतज्ञ छु, उनले दोहोर्‍याइन्। मैले पानी हालेका बिरुवाहरूले राम्रो पोषण पाएको र राम्रोसँग हुर्किएको देखेकी छु,उनले भनिन्।
तर जब उनले महिनावारी हुँदाको रगत शरीरमा दल्छिन्, उनले भनिन् उनी आँखा बन्द गर्छिन् र आफू उर्जावान् भएको महसुस गरेर कृतज्ञ हुन्छिन्।लौराका लागि यो चलन महिला सशक्तिकरणको विषयसँग पनि जोडिएको छ।
उनले भनिन्, महिनावारी हुँदाको रगतबारे समाजको धारणा एकदमै विभेदपूर्ण छ र महिनावारी हुँदा स्वयं महिलाले पनि त्यही महसुस गर्छन् भन्ने विषय लज्जाजनक हो।ूूसिडिङ द मुन एकदमै साधारण र महिलालाई मनको शान्ति दिने एकदमै शक्तिशाली तरिका हो, सन् २०१८ मा ुवर्ल्ड सीड योर मून डेु कार्यक्रम सुरु गर्ने लेखिका, नर्तकी तथा साइकोथेरापिस्ट मोरेना कार्डोसोले भनिन्।
उक्त कार्यक्रम गर्नुको उद्देश्यबारे मोरेनाले भनिन्,महिनावारीका बेला हुने रक्तस्राव लज्जाको विषय नभइ शक्ति र गौरवको कुरा भन्ने मानिसले बुझुन्।
उक्त कार्यक्रम अब अगस्ट ४ तारिखमा हुँदैछ।मोरेनाका अनुसार उत्तर अमेरिका ९मेक्सिकोसहित० र पेरुका आदिवासी संस्कृतिमाझ जमिनलाई उर्बर बनाउनका लागि महिनावारीको बेलाको रगत हाल्ने गरिन्छ।
यसलाई महिलाहरूको आध्यात्मिक कार्य र किशोरीहरू महिला हुने एउटा संस्कारको मार्गका रुपमा पनि हेरिन्छ।तर अन्य समाजहरूमा भने महिनावारीको रगतलाई लिएर एकदमै नकारात्मक धारणा रहेको मानवशास्त्री ड्यानिला टोनेल्ली मनिकाले बताइन्।
महिनावारी हुँदाको रगतलाई काम नलाग्ने भनेर हेरिन्छ, उनले भनिन्, यसलाई दिसापिसाब जस्तै कसैले नदेख्ने गरी केवल बाथरुमभित्र फालिने वस्तुजस्तो गरी त्यही श्रेणीमा राखिन्छ।
सन् १९६० मा महिलाहरूको आन्दोलनले यी धारणाहरू परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको थियो। त्यतिबेला महिलालाई उनीहरूको शरीरबारे खुलेर कुरा गर्न प्रोत्साहित गरिएको थियो। त्यसपछि कलाकारहरूले महिनावारी हुँदाको रगतलाई लैङ्गिक र राजनीतिक अनि पर्यावरणबारे धारणा व्यक्त गर्न प्रतीकका रुपमा प्रयोग गरेका थिए।
बिरुवामा पानी हाल्ने कामले मेरो आँखा खोलिदियो। हाम्रो गर्भाशय जस्तै पृथ्वी पनि एउटा ठूलो गर्भाशय हो जसले अंकुरण गर्छ, इन्टरनेटबाट यो प्रथाबारे थाहा पाएकी रेनाटा रिबेइरोले भनिन्।हामीलाई पृथ्वीले जे दिएको छ त्यो उसलाई फिर्ता गर्नु मलाई लाग्छ जायज हो।
उनी नुहाउँदा महिनावारी हुँदाको रगत जम्मा गर्छिन् र तुलसी रोपेको भाँडोमा हाल्छिन्। रेनाटाले पुदिना पनि रोपेकी छन् र त्यसमा चाहिँ त्यस्तो रगत मिसिएको पानी हाल्दिनन्। उनका अनुसार त्यो विरुवा लत्रिएको देखिन्छ। उनले ठट्टा गर्दै त्यो कुपोषित भएको बताइन्।
४३ वर्षीया उनको पहिलोपटक उनी किशोरी अवस्थामा प्रवेश गर्दा महिनावारी भएको थियो। उनले त्यतिबेला सुनेकी थिइन्स् ूअब तिमी महिला भयौ, तिम्रो प्रत्येक महिना महिनावारी हुन्छ तर त्यो कसैले थाहा पाउन आवश्यक छैन।ू
उनले त्यसलाई नियमित एउटा झर्को लाग्दो कुराका रुपमा हेरिन्। र पुरुषहरूको डाहा गरिन् जसले यो सबै झेल्नुपर्दैन। अहिले भने उनी आफ्नो महिनावारीलाई पवित्र कुराका रुपमा हेर्छिन्।१४ देखि २१ वर्ष उमेर समूहका १५ सय महिलामा गरिएको एउटा विश्वव्यापी सर्वेक्षणले अझै कतिपय समाजमा यो विषय बर्जित छ भन्ने देखाउँछ।
जोनसन एण्ड जोनसनले ब्राजिलमा गरेको उक्त अध्ययनका अनुसार भारत, दक्षिण अफ्रिका, अर्जेन्टिना र द फिलिपिन्समा महिलाहरू स्यानीटरी सामाग्री किनेको, फालेको वा महिनावारीका बेला बसिरहेको ठाउँबाट उठ्न लज्जित महसुस गर्छन्।युवा फिल्मनिर्माता रेका जेहताब्चीले निर्देशित गरेको एउटा सानो वृत्तचित्र पिरियड।
वाक्यको अन्त्यू, मा भारतको हापुर क्षेत्रका स्थानीय महिलाले अन्य महिलालाई स्यानीटरी प्याड सहज रुपमा पाइयोस् भन्नका लागि गरिएको प्रयास देखाइएको छ। यी मध्ये एकले महिनावारी हुँदाको रगत अपवित्र भएको बताएकी छन् भने अर्कीले स्यानीटरी प्याडको पहुँच कम हुँदा विद्यालय छोड्न बाध्य भएको स्वीकारेकी छन्।
महिनावारीबारे रहेका गलत बुझाइ हटाउनका लागि आजकाल महिनावारीबारे बोल्न नलजाउने महिलाहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको उनले बताइन्।तर सिडिङ द मुनको अभ्यास स्वीकार गर्न सबै तयार छैनन्( र लौराले गत जुनमा महिनावारी हुँदाको रगत अनुहार र छातीमा दलेर खिचेको सेल्फी पोष्ट गरेर कोलाहल मच्चाइन्।
मेरो जम्मा तीनसय फलोअरहरू थिए र मैले सोचेकी थिएँ त्यो पोष्ट गर्दा यो विषयबारे महिलालाई सघाउ पुग्नेछ,ू उनले भनिन्।त्यसको चार दिनपछि इन्स्टाग्राममा उनको हाँसो उडाइयो।
उनले उक्त पोस्टमा लेखे, महिनावारी हुँदाको रगत सामान्य हो तर के असामान्य हो भने त्यसलाई आफ्नो अनुहारमा लगाउनु।
तर उनको ठट्टामिश्रित उक्त पोस्टमा २३ सय वटा प्रतिक्रिया आए जसमा नकारात्मक धेरै छन्। लौराले यो विषयले समाजमा महिनावारीको विषय अझै पनि कति वर्जित छ भन्ने पुष्टि गरेको बताइन्।
उनले भनिन्, मानिसहरूले सोच्छन् कि यदि उनीहरूलाई केही सामान्य लागेन भने त्यो पक्कै पनि अवास्तविक हो। उनीहरूलाई लाग्छ कि घृणा फैलाउने शब्द प्रयोग गरेर कसैको चित्त दुखाइ उनीहरू मोबाइल फोनको पछाडि लुक्नसक्छन्।
ूयो मेरो रगतबाट निस्कने रगत हो र यसबारे के सामान्य हो र के होइन भन्ने निधो मैले गर्छु। मैले कसैको जीवनमा हस्तक्षेप गरेकी पनि छैन।
लौराले भनिन्, ूमानिसलाई नराम्रो गाली दिनु चाहिँ असामान्य हुनुपर्ने हो। म यस्तो गर्न त्यो दिन बन्द गर्छु जुन दिन मानिसहरूले महिनावारीको रगतलाई प्राकृतिक हो भनि हेर्न थाल्नेछन्। एजेन्सी
काठमाडौँ,२७ जेठ । गोरखाको बारपाकका एक बिरामीलाई हेलिकोप्टरबाट उपचारका लागि काठमाडौँ लगिएको छ । उक्त
जिल्ला समन्वय समिति ताप्लेजुङको निर्वाचन ३१ गते हुने
काठमाडौँ,२७ जेठ । जिल्ला समन्वय समिति ताप्लेजुङको निर्वाचन यही ३१ जेठमा हुने भएको छ ।
मेलम्चीको अस्थायी पुलमा क्षति हुँदा यातायात अवरुद्ध
काठमाडौँ,२७ जेठ । लगातारको वर्षाका कारण मेलम्ची नदीमा बनाइएको अस्थायी पुलमा क्षति पुगेको छ ।
मैले कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेको छैन :अध्यक्ष ओली
काठमाडौँ,२७ जेठ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनताले आगामी प्रदेश र संसदीय